Genting Highlands လိုက်ပို့ခဲ့တယ်… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Local Guides » Genting Highlands လိုက်ပို့ခဲ့တယ်…
Posted by aungnng87 on Oct 21, 2011 in Local Guides, Photography | 10 comments
Genting Highland သွား ခြင်း
ပြီးခဲ့တဲ့sunday တုံးက ရန်ကုန်ကဧည့်သည်တွေကို genting highlandကိုလိုက်ပို.ပေးခဲ့တယ်။ ၃ခေါက်၎ခေါက်လောက်ရောက်ဖူးနေပေမဲ့ genting ကတစ်ခါသွားတစ်ခါအသစ်ဖြစ်နေတော့ လိုက်ပို.ပေးရ တဲ့ကိုယ်တို့တွေတောင်မျက်စိလည်ချင်တယ်။ အဲဒီ genting highland ဆိုတာကွာလာလမ်ပူကနေတနာရီလောက်ကြာအောင်ကားစီးရတယ်။တောင်ပေါ်မှာတည်ထားတဲ့ Resorts World ပေါ့။ ပင်လယ်ရေမျက်မှာပြင် ကနေတိုင်းရင် အမြင့် ၁၈၆၀ metre လောက်မှာတည်ထားတာပါ။ တောင်ပေါ်မှာတည်ထားတဲ့အတိုင်းတောင်ပေါ်ရောက်တာနဲ. အေးစိမ်.သွားတာဘဲ။ မြူတွကလည်းဆိုင်းနေတာဘဲ။
တည်ထားတဲ့သူတွေရဲ.idea ကတော်တော်ကောင်းတယ်။ အဲဒီမှာHotel တွေ၊ Resorts တွေ၊ ကာစီနိုတွေ။gamesတွေအမျိုးမျိုးနဲ.ရောက်သွားရင်တော်တော်ပျော်ဖို.ကောင်းတယ်။ ပြီးတော့ car cable လို.ခေါ်တဲ့ sky way ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်။ အဲဒီ sky way ကဗမာလိုဘဲပြောရရင်တောင်ပေါ်နဲ.တောင်အောက်ကိုဆက်ထားတာပေါ့။ အဲဒီsky way မစီးချင်၇င်လည်း ကားနဲ.ဘဲတောင်အောက်ဆင်းလို.ရတယ်။တောင်ပေါ်တန်းတက်လို.ရတယ်။ ကိုယ်ကတော့ sky way စီးရတာကိုကြ်ုတယ်။ မြင်ကွင်းတွေကိုအပေါ်စီးကနေမြင်ရတာပေါ့. ပြီးတော့ကြောက်လည်းကြောက်တယ်။ sky way ကြီး
ကားနဲ့တက်ရင် တောင်ပတ်လမ်းတွေကြောင့် ကားကဝေ့၀ိုက်ပြီး တက်နေရတော့မူးတယ်။ ဒါပေမဲ့တောင်ပေါ်ရောက်သွားရင်တော့ လန်းဆန်းသွားတာပေါ့။ ကားနဲ့ဆင်းရင်တော့ ပိုဆိုးတယ်။ တောင်ပေါ်မှာအစားစားပြီးတော့ဆင်းတော့ ကားက တချက်ကွေ့လိုက်တိုင်း တခါမူးတာ တောင်ပတ်လမ်းပြီးပေမဲ့မြေပြန့်လမ်းကိုမိနစ်၄၀လောက် ဆက်မောင်းရသေးတာဆိုတော့ လူကငြီးစီစီကြီးဖြစ်ပြီးနေလို့မကောင်းတော့ဘူး။ အမြဲတမ်း အန်တာဘဲ။ ကာစီနိုထဲဝင်တော့ရဲတွေကစစ်ပါတယ်.။ခလေးတွေပေးမ၀င်ဘူးဆိုတော့ ဧည့်သည်ခလေးအမေလည်းမ၀င်ရဘူး။ သူ့လိုက်ပြတာ သူမ၀င်ရဘူဆိုတော့ ခလေးကလည်းသူမရှိရင်မနေဘူးဆိုတဲ့ခလေးမျိုး….အဲဒါနဲ့ကိုယ်ရယ်၊ကိုယ်ယောက်ကျားရယ်၊သူ့ယောက်ကျား ရယ်ဝင်မယ်လုပ်တော့ ကိုယ့်ယောက်ကျားရယ်၊ကိုယ်ရယ်က ခြေညှပ်ဖိနပ်ဝတ်ထားတာ၊ရဲကကိုယ်တော့ဘာမှမပြောဘူး။ ကိုယ့်ယောက်ကျားကျတော့ခြေညှပ်ဖနပ်နဲ့မို့ဝင်လို့မရဘူးတဲ့ဆိုလို့ နောက်ဆုံးကိုယ်ရယ် ယောကျားလေးနှစ်ယောက်ရယ်ဘဲဝင်သွားရတယ်။ အရင်တုန်းကတော့ ကာစီနိုထဲဝင်ရင် ကင်မရာတွေ၊ ဗီဒီယိုတွေသယ်လို့မရဘူး။ အခုတော့ ဘာမှမပြောဘူး။ သူတို့လည်းတဖြေးဖြေး open ဖြစ်လာတဲ့သဘောရှိတယ်။ ကာစီနိုထဲမှာလည်းလူတွေကအပြည့်ဘဲ။ တရုတ်တွေဘဲအများစု.။တရုတ်တွေလောင်းကစားဝါသနာပါတာကတော့မပြောနဲ့.။ ကိုယ်တွေ့ဘူးတယ်။တရုတ်အဖိုးကြီးတွေ၊အဖွားကြီးတွေ တပတ်လုံးအလုပ်လုပ်ပြီး စနေ၊တနင်္ဂနွေဆိုရင်တောင်ပေါ်တက်ဖဲရိုက်၊ဂိမ်းကစား။နိုင်နိုင်ရှုံးရှုံး ဆော့ကြတာဘဲ။ ပိုက်ဆံကုန်သွားရင်သူများဆီကချေးပြီးသုံးတာ။အဲလိုမျိုး။ စဉ်းစားမိတယ် အော်..ငါတို့ဗမာပြည်ကလူကြီးတွေ ဒီကလူတွေထက်သာတယ်လို့။ကိုယ်တွေဆီကလူကြီးတွေ အသက်ကြီးလာရင်ဟုတ်ဟုတ် မဟုတ်ဟုတ်ဘုန်းကြီးကျောင်းသွား။ တရားစခန်းဝင် ဘာသာရေးလုပ်ကြတယ်။
ဒီကလူတွေအသက်ကြီးလည်း အလုပ်လုပ်နေကြတုန်း၊ ဘာသာရေးလုပ်တဲ့သူတော်တော်ရှားတယ်။ တခါတလေစားသောက်ဆိုင်မှာသူများသောက်ထားတဲ့ ဘီယာဘူးခွံတို့အချိုရည်ဘူးခွံတို့ကောက်ပြီးအလေးချိန်နဲ့ပြန်ရောင်းစားကြတယ်။ သုံးလည်းသုံးတယ်၊ရှာလည်းရှာတဲ့သဘောပေါ့။
စကားတွေကဝေ့ကုန်ပြီ။အမှန်ကတော့ genting သွားလို့ ပုံလေးတွေတင်မလို့.
ဒါကတော့ puduyara ဘတ်(စ)ကားဂိတ်ပါ။ genting သွားချင်ရင် ဒီကနေကားစီးရပါတယ်။
ဒါကတော့ဘတ်(စ)ကားပေါ်ကနေ Highway လမ်းမကြီးဘေးကိုရိုက်တာ။ သူတို့ဆီမှာ မြို့ကနေထွက်တာနဲ့၁၀မိနစ် လောက်ရှိတာနဲ့လမ်းဘေးမှာတောအုပ်တွေတွေ့ရတာဘဲ.။သူတို့နိုင်ငံက green peace ကိုလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့နိုင်ငံဆိုတော့ အစိမ်းရောင်တွေ့ရတာများတယ်။
ဘတ်(စ)ကားနဲ့လာပြီးတောင်အောက်ရောက်ရင် ဒီနေရာမှာ sky way စီးဖို့စောင့်ရပါတယ်။
ကိုယ်နောက်မှာလည်းအများကြီးဘဲ။ ဒါပေမဲ့လည်း ကြောက်တယ် စီးရတာ.. ရင်လည်းတုန်တယ်။
ရောက်ပါပြီ genting highland. အဲဒါသူများပုံတွေနော်. ။အခုတခေါက် ကိုယ်ပုံတောင်မရိုက်ဖြစ်ဘူး။
ဟော်တယ်ကြီးတွေ နှင်းမှုန်မှုန်အောက်မှာ။ အဲဒီဟော်တယ်ကြီးတွေထဲဝင်သွားရင်
ကာစီနိုတွေ၊ ဂိမ်းတွေရှိတယ်။ ဒါတွေတော့ ဓါတ်ပုံရိုက်လို့ မရဘူး။
ဆိုတော့ ခြုံပြောရရင် genting highland ဟာအလွန်သာယာ နာပျော်ဘွယ်ကောင်းတဲ့နေရာလေးတခုပါ။
အဲဒီကိုရောက်ရင် လူကြီးလူငယ်မရွေး ပျော်ရွှင်ကြတယ်.။ ရွာသားများလည်း လာလည်ကြည့်ပါလို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
သဂျီးရေ.. ခေါင်းစဉ်တပ်ဖို့မေ့သွားလို့. ။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိတော့ဘူး။ အရှိန်လွန်သွားပြီ။
genting highland ပုံလေးတွေ ပြန်မြင်ရတော့ ရောက်ခဲ့ဖူးတာလေး ပြန်သတိရလာတယ်။
အဝင်မှာ လက်ပတ်လေးတွေ ပတ်ပေးတာ၊ အထဲရောက်ရင် ဘာဖြစ်ဖြစ် အလကား စီးခွင့် (ကစားခွင့်ရတာ) မှတ်မိနေတယ်။ဆောင်းမရှိတဲ့ KL မှာ ဆောင်းရာသီကို genting highland မှာမှ ခံစားရတာလေးလဲ မှတ်မိနေသေးတယ်။ခရီးလေးတွေ ဆက်ရေးပါ၊ အားပေးနေမယ်။
မရောက်ဖူးတဲ့ နေရာလေးတွေ ကြည့်ခွင့်ရတာ ဝမ်းသာစရာပါ…၊
အင်းနော်… ကိုယ့်နိုင်ငံနဲ့တော့ ကွာပ…၊
ဒါတွေ ငေးမောရင်း နဲ့ ဝမ်းနည်းမိသား…။
“ သူတို့နိုင်ငံက green peace ကိုလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့နိုင်ငံဆိုတော့ အစိမ်းရောင်တွေ့ရတာများတယ်။ ”
ဆိုတာကို ဖတ်ရလို့ ၊ ကျွန်ုပ် တို့ နိုင်ငံ မှာလည်း တစ်နေ့ ဖြစ်လာမှာပါလို့ မျှော်လင့်မိတယ်ဗျာ
Greenpeace လက်မှတ်ထိုးထားတယ်ဆိုတာ.. သိပ်မရှင်းလို့..။
အဲဒါက.. အစိုးရမဟုတ်တဲ့..အဖွဲ့အစည်းကြီးပဲ..။ လက်မှတ်ထိုးထိုးမထိုးထိုး.. အစိမ်းရောင်(သဘာဝဂေဟ)တွေထိခိုက်ရင်.. ၀င်ကန့်ကွက်လို့ရတယ် ထင်မိတာပါ..။
အဲဒီလိုလက်မှတ်ထိုးထားလို့ရှိရင်.. သဘာ၀၀န်းကျင်ထိမ်းသိမ်းတာမှာ.. ၀င်ရောက်ပါဝင်ကူညီပေးနိုင်တယ် ဆိုရင်တော့..မြန်မာပြည်အစိုးရကိုလည်း.. အတင်းလက်မှတ်ထိုးခိုင်းရမယ်..။
မနက်ဖြန်.. လက်စ်ဗေးဂတ်သွားမှာမို့.. အဲဒီက..ကာစီနိုတွေအကြောင်းလည်း.. ဓါတ်ပုံရိုက်လာခဲ့မယ်..။
ဖြစ်နိုင်ရင်ပေါ့နော်၊ ဆရာကြီးမောင်သာရ ရေးထားတဲ့ စာတိုပေစလေး တခုခုလောက် ယူလာပေးပြီး ဒီမှာတင်ပေးနိုင်ရင်
အခုအသက်အရွယ်မှာရေးတဲ့ ဆရာကြီးရဲ့ Latest dated အတွေးအခေါ်လေးကိုဖတ်ကြည့်ချင်မိလို့ပါခင်ဗျာ။
ဆရာကြီးစာတွေ.. မန္တလေးဂေဇက်မှာ ပုံနှိပ်ဖေါ်ပြဖူးတယ်.။အဲဒီထဲကတချို့တ၀က်..ပြန်မြည်းလို့ရအောင် လင့်ခ်ပေးလိုက်ပါတယ်..။
ကိုစိန်သော့က လေ့လာရေးအဖွဲ့အနေနဲ့သော်၎င်း ၊နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့သော်၎င်း သွားရလို့လက်ပတ်ပတ်ပေးပြီး ကစားကွင်းကိုအလကားစီးရတာနေမှာ… ကျနော်ပထမဦးဆုံးအခေါက်တုန်းကလည်း အဲလိုဘဲလေ…နိုင်ငံတော်စရိတ်နဲ့ နေရာတော်တော်များများ ဖရီးသွားရတာ…။၀န်ကြီးချုပ်မဟာသီရာမိုဟာမက်အိမ်တောင်ရောက်ခဲ့သေးတယ်။ အဲဒီမှာနိုင်ငံတကာကလက်ဆောင်ပေးထားတာတွေတောင် တွေ့ခဲ့ရသေးတယ်။ ကိုပေရေ…ကျနော်တို့နိုင်ငံက green peace ကိုလက်မှတ်မထိုးပေမဲ့ စိမ်းတဲ့နေရာတွေအများကြီးလို့ထင်ပါတယ်။ သဂျီးရေ….ခေါင်းစဉ်တပ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဘဲ။ ကျနော်ထင်တာတော့ green peace ကိုလက်မှတ်ထိုးထိုးမထိုးထိုး၊ သဘာဝကိုထိခိုက်ရင်ကန့်ကွက်လို့ရတယ်ဆိုတာအခုနှစ်ပိုင်းတွေမှလို့ထင်တာဘဲ။ အရင်တုန်းကတော့မပြောသာဘူးလို့ထင်တာဘဲ.။ ကန့်ကွက်လို့များ၇ရင် ဂေဟတွေလည်းဒီလောက်ပျက်စီးမှာမဟုတ်ဘူး။
ရောက်ခဲ့တာ နှစ်အတော်ကြာပြီ ဆိုတော့ အခုတော့ ပြန်ပြီး အမှတ်ရစေခဲ့ပြီပေါ့။
ဆူး က ပိုစ်တခု အနေနဲ့ ရေးရအောင် မေ့ကုန်တာ များလို့.. အခုဖတ်မှ ပြန်သတိရတာတွေ တောင် ရှိတယ်။
ဟုတ်လားဆူးရေ….အဲဒါဆိုလည်း ပြန်သတိရသွားအောင်နောက်တခေါက်လောက်ထပ်လာခဲ့ပါဦးလား။ တခြားနေရာတွေထပ်သွားကြသေးတာပေါ့